I-NewTek Ushers Evolution Of Software-Defined Visual Storytelling ku-IBC 2019 - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - NAB Show LIVE
Ikhaya » Okufakiwe » I-NewTek Ushers Evolution Of Software-Defined Visual Storytelling e-IBC 2019
I-NewTek Ushers Evolution Of Software-Defined Visual Storytelling e-IBC 2019
Akungabazeki ukuthi ukuba nezinguquko ezishintshayo, isoftware engenamkhawulo ebukhoma, kanye nezisombululo ezisheshayo / ezilula kuvidiyo ye-IP ivumela I-NewTek ukufaka ngokuqhubekayo ekunwetshweni okuqhubekayo kwamakhono omsebenzisi. I-NewTek ivuselela umhlaba wokukhiqizwa kwevidiyo, futhi umpetha wevidiyo ye-IP ngokuqinisekile uzokhombisa leli talente eliyingqayizivele liza maphakathi no-Septhemba I-IBC 2019.
Kusukela ku-1985, I-NewTek uholele umkhakha wekhompiyutha wevidiyo ye-IP ngokukhiqiza amathuluzi e-video bukhoma nangemva kokukhiqizwa, kanye nesoftware yokubonakalayo yamakhompiyutha uqobo. Kulonyaka, edolobhaneni lakubo laseSan Antonio, eTexas, le nkampani yadlula ngalapho inemisuka yayo yaseKansas futhi ikhombisa ukuthi isifikile kanjani isibonakaliso sokuqanjwa kobuchwepheshe. NgoSepthemba 4th, 2019, I-NewTek ukunwebeka emngceleni we-Software-Defined Visual Storytelling lapho kukhombise amandla wevidiyo ye-IP jikelele.
UMongameli we-R&D we Vizrt Group
Ngokuvumelana ne UDkt Andrew Cross, umongameli we I-R&D yeQembu leVizrt, (uhlobo lomzali lwe I-NewTek), umnyombo oyinhloko we I-NewTek kuwukuthi "Nika amandla abahleli bezindaba bevidiyo futhi bandise ukufinyelela kwabo, okwenza kube mnandi futhi kujabulise ukudala imibukiso nokukhipha umyalezo wakho" Isiphambano siqhubekele phambili nokusho lokho "Kucace kunanini ngaphambili ukuthi i-IP akuyona kuphela indinganiso yokukhiqizwa kwamavidiyo, ikusasa levidiyo." Ubuye waveza nemikhiqizo emisha yenkampani entsha nokuthi ngayinye bayinikeza kanjani okuthile okunamandla amakhulu nganoma yimuphi umsebenzisi wezinga. Iningi lemikhiqizo emisha ifakiwe:
Umdali Wendaba Ebukhoma
Sibonga u Isofthiwe ye-NewTek Premium Access, abathengisi bezindaba manje sebekwazi ukwenza ngcono izindleko zabo zobunikazi bazo I-NewTek amasistimu okukhiqiza anezici zakamuva zokusika, futhi konke lokhu kubonga kuMdali Wezindaba Oukhoma. Umhleli obukhoma weNdaba isebenzisa iMicrosoft® Word® ukwakha iskripthi kwiMicrosoft Word eshukumisa izenzo, okuvumela ukuthi ikwazi ukwenza umbukiso ogcwele ku-TriCaster® noma i-VMC1. Ukufinyelela kwe-Premium kufaka ne-scalable ye-NDI® yokuqopha futhi ibuye kabusha ngokuvumelanisa okugcwele kokukhiqizwa okulula kwamakhamera amaningi, isilinganiso semidiya yedijithali kanye namanani entengo wesikrini sedijithali / ukulethwa kwe-LiveGraphics, i-NDI KVM, i-LivePanel, i-Advance Audio, i-Virtual PTZ, nokuningi.
Izinhlelo ze-TriCaster zihlomisa abasebenza ngemidiya yedijithali ngensizakalo enkulu yamakhono okukhiqiza imidiya, okubeka ikhwalithi, ukuvumelana, kanye nokusebenza kahle njengezinto eziza kuqala. I-TriCaster 410 Plus ayiyona eyehlukile njengoba isebenza njengohlelo olungenamakhaza olunezici ezifana:
Okokufaka kwe-8 kwangaphandle 4 M / Es
Imiphumela yokuxuba ye-4
Ukushicilelwa kwemidiya yangempela
Ukuqoshwa kweziteshi eziningi
Kuhlanganiswe izibukeli eziningi
Ukuhanjiswa komsindo nedatha
Ukuhlanganiswa kwe-NDI yevidiyo
I-TriCaster 410 Plus inikwa amandla ubuchwepheshe obuchazwe yisoftware, obamba amandla okuvusa umdwebi wangaphakathi ngaphakathi kwanoma yibaphi abezindaba abanekhono ngokwanele ukuze basebenzise ngokugcwele futhi baphendule lonke uhlaka lwevidiyo lube yilokho okuzoba ubuciko bokunqoba kwezobuciko.
I-NewTek I-Spark Plus 4K
I-NewTek Ama-Spark converters angatwebula ividiyo ngokuqondile kusuka kumakhamera axhunyiwe noma amadivayisi wokuhamba kunethiwekhi njenge-visualless. Okwengezwe okusha yi-Spark Plus ™, okuyithuluzi le-bandwidth ephezulu elisekela izinqumo ezifinyelela ku-4K kusuka I-HDMI-ku-NDI-nge-no-no-latency. Amadivayisi weSpark Plus ayindlela encane kunazo zonke, esheshayo futhi elula yokuthola umthombo wevidiyo we-4K kusuka noma kukuphi kunethiwekhi.
Ngalo mzamo wezobuchwepheshe wakamuva, I-NewTek iguqula izindlela zokufakwa kwezindaba ezibukwayo zingafakwa. The I-NewTek kuzoba nombukiso IBC2019, IHholo 7 Booth #C12 ngesikhathi Isikhungo somhlangano weRAI e-Amsterdam kusuka ngoSepthemba 13-17 lapho izokhombisa izingqikithi zayo kanye nezisombululo ezingezekile ezifana:
Spark Iziguquli ze-IP
I-NVG1 IP Graphics Server
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe mayelana I-NewTek kwa-IBC 2019, bese uhlola www.newtek.com/ibc2019/.
Amsterdam CES2017 I-Digital Nirvana I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor I-IBC ibc 2019 Ukuhlanganiswa ukuqapha imidiya I-MStar I-NewTek SJGolden - SoftAtHome I-SoftAtHome, i-MStar, i-CES2017 I-Software-Defined Visual Storyelling Ama-spears nama-Arrows I-subtitling I-NewTek Spark Plus 4K I-TriCaster 410 Plus UMdali weNdaba yeLive I-TVU Izinethiwekhi	2019-09-05
Ngaphambilini: I-NUGEN Audio Yembula Isixazululo Sokulumkisa New Navigable Alert se-VisLM e-IBC 2019
Olandelayo: Izinsiza Ezintsha Nezingqayizivele ku-Telestream Lightspeed Live Stream & Capture Dlulisa Okuphezulu Kwekhwalithi ephezulu Ngokuthembekile ku-Scale